Ranorex v8.x (Basic to Advanced) Training in Gurgaon
သင့်ရဲ့ Password ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရ?
မamember?
ရိုးရှင်းစွာဆိုသင်တန်းများကို booking / မဝယ်ခင် account တစ်ခုဖန်တီးပေးပါ။
တစ်ဦးနှင့်အတူမှတ်သား fields * လိုအပ်သည်
အာဖဂန်နစ္စတန်အယ်လ်ဘေးနီးယားအယ်လ်ဂျီးရီးယားအမေရိကန်ဆာမိုအာအင်ဒိုရာအင်ဂိုလာနိုင်ငံအန်ဂွီလားအန္တာတိကဂွါထိုအဘာဘူဒါအာဂျင်တီးနားအာမေးနီးယားယူးဘားၾသစေတးလ်သြစတြီးယားအဇာဘိုင်ဂျန်ဘဟားမားဘာရိန်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘာဘေးဒိုးစဘယ်လာရုစ်ဘယ်လ်ဂျီယမ်belizeဘီနင်ဘာမြူဒါဘူတန်ဘိုလီးဗီးယားဘော့စနီးယားနှင့်ဟာဇီဂိုဗီးနားဘော့ဆွာနာဘူးဗက်ကျွန်းဘရာဇီးဗြိတိန်နိုင်ငံကအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနယ်မြေတွေကိုဘရူနိုင်းဘူလ်ဂေးရီးယားBurkina Fasoဘူရွန်ဒီကမ္ဘောဒီးယားကင်မရွန်းကေနဒါကိပ်ဗာဒီကေမန်ကျွန်းစုဗဟိုအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံချဒ်ချီလီတရုတ်နိုင်ငံခရစ္စမတ်ကျွန်းကိုးကိုစ် (ကီးလင်) ကျွန်းများကိုလံဘီယာကော်မ္မရိုဇ့်ကွန်ဂိုကွန်ဂိုက The ၏ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံကွတ်ကျွန်းစုကော့စတာရီကာCote d'Ivoireခရိုအေးရှား (ဒေသခံအမည်: Hrvatska)ကျူးဘားဆိုက်ပရပ်စ်ချက်သမ္မတနိုင်ငံဒိန္းမတ္ဂျီဘူတီနိုင်ငံဒိုမီနီဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံအရှေ့တီမော (အရှေ့တီမော)အီကွေဒေါနိုင်ငံအဲဂုတ္တုပြည်၌အယ်လ်ဆာဗေးဒေါအီကွေတာဂီနီနိုင်ငံအီရီထရီးယားအက်စ်တိုးနီးယားအီသီယိုးပီးဖောက်ကလန်ကျွန်းစု (မာလ်ဗီး)ဖရိုးကျွန်းစုဖီဂျီဖင်လန်ပြင်သစ်ပြင်သစ်, Metropolitanပြင်သစ်ဂီယာနာပြင်သစ်ပိုလီနီးရှားပြင်သစ်တောင်ပိုင်းနယ်မြေgabonဂမ်ဘီယာGeorgiaဂျာမနီဂါနာဂျီဘရောလ်ဂရိနိုင်ငံဂရင်းလန်းနေးဒါGuadeloupeဂူအမ်ကျွန်းဂွာတီမာလာဂီနီနိုင်ငံဂီနီဘစ်ဂိုင်ယာနာဟေတီကြားသိပြီးတော့မက်ဒေါ်နယ်ကျွန်းများသန့်ရှင်းသောဘုရား See (ဗာတီကန်စီးတီးပြည်နယ်)ဟွန်ဒူးရပ်စ်ဟောင်ကောင်ဟန်ဂေရီအိုက်စလန်အိႏၵိယအင်ဒိုနီးရှားအီရန် (၏အစ္စလာမ့်သမ္မတနိုင်ငံ)အီရတ်အိုင်ယာလန်ဣသရလေအီတလီဂျမေကာဂျပန်ယော်ဒန်မြစ်ကာဇက်စတန်ကင်ညာကီရီဘာတီကိုရီးယား, ဒီမိုကရက်တစ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၏ကိုရီးယား, သမ္မတနိုင်ငံ၏ကူဝိတ်ကာဂျစ္စတန်လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံလတ်ဗီးယားလေဗနုန်တောလီဆိုသိုလိုက်ဘေးရီးယားနိုင်ငံလစ်ဗျားအာရပ် Jamahiriyaလီချင်စတိန်းလစ်သူလူဇင်ဘတ်မကာအိုမက်ဆီဒိုးနီးယား, ဟောင်းယူဂိုဆလပ်သမ္မတနိုင်ငံဒါဂတ်စကာမာလာဝီမေလးရွားမော်လ်ဒိုက်မာလီမော်လ်တာမာရှယ်ကျွန်းစုမာတီနစ်Mauritaniaမောရစ်ရှမာယော့တ်မက္ကစီကိုMicronesia, ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုမော်လ်ဒိုဗာ, အနက်သမ္မတနိုင်ငံမိုနာကိုမွန်ဂိုလီးယားမွန်တီနီဂရိုးမွန်ဆာရတ်မော်ရိုကိုမိုဇမ်ဘစ်ျမန္မာႏုိင္ငံနမီးဘီးယားNauruနီပေါနယ်သာလန်နယ်သာလန်အန်တီနယူးကယ်လီဒိုးနီးယားနယူးဇီလန်နီကာရာဂွာနိုင်ဂျာနိုင်ဂျီးရီးယားနီယူးNorfolk ကျွန်းမြောက်ပိုင်းမာရီယာနာကျွန်းများေနာ္ေဝးအိုမန်ပါကစ္စတန်ပလောင်းပနားမားပါပူဝါနယူးဂီနီနိုင်ငံပါရာဂွေးပီရူးဖိလစ္ပုိင္Pitcairn-ပိုလန်ပေါ်တူဂီPuerto Ricoကာတာနိုင်ငံပြန်လည်ပူးပေါင်းခြင်းရိုမေးနီးယားရုရှားပြည်ထောင်စုရဝမ်ဒါစိန့်ကစ်ထိုအဗစ်စိန့်လူစီယာစိန့်ဗင်းဆင့်ထိုအခါအဆိုပါဂရိဆာမိုအာဆန်မာရီနိုစဝ်အိုတိုမီနှင့်ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးဆော်ဒီအာရေဗျsenegalဆားဘီးယားseychellesဆီယာရာလီယွန်စင္ကာပူႏုိင္ငံဆလိုဗက်ကီး (စလိုဗကျသမ်မတနိုငျငံ)ဆလိုဗေးနီးဆော်လမွန်ကျွန်းစုဆိုမာလီယာတောင်အာဖရိကတောင်ပိုင်းဂျော်ဂျီယာ, တောင် Sandwich ကကျွန်းစုတောင်ပိုင်းဆူဒန်စပိန်သီရိလင်္ကာနိုင်ငံစိန့်ဟယ်လီနာစိန့် Pierre ၏ထိုအမီကွီလွန်ဆူဒန်ဆူရာနမ်Svalbard နှင့်ဇန်နဝါရီ Mayen ကျွန်းများဆွာဇီလန်ဆြီဒင္ႏုိင္ငံဆွစ်ဇလန်ဆီးရီးယားအာရပ်သမ္မတနိုင်ငံထိုင်ဝမ်Tajikistanတန်ဇန်းနီးယား, အနက်ယူနိုက်တက်သမ္မတနိုင်ငံထုိင္းႏုိင္ငံတိုဂိုအဘိဓါန် TokelauTongaထရီနီဒက်နှင့်တိုဘာဂိုတူနီးရှားကြက်ဆင်တာ့ခ်မင်နစ္စတန်တူရကီထိုအကိုင်းကော့စ်ကျွန်းများTuvaluယူဂန်ဒါနိုင်ငံယူကရိန်းအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုယူနိုက်တက်စတိတ်မိုင်းနာ​​းပြင်ပကျွန်းများဥရုဂွေးဥဇဘက်ဗာနူအာဗင်နီဇွဲလားဗီယက်နမ်Virgin Islands (ဗြိတိန်နိုင်ငံ)Virgin Islands (အမေရိကန်)Wallis ဟာထိုအ Futuna-ကျွန်းများအနောက်တိုင်းဆာဟာရယီမင်ယူဂိုဆလားဗီးယားဇမ်ဘီယာဇင်ဘာဘွေ
Gurgaon အတွက် Ranorex v8.x (Advance မှအခြေခံပညာ) လေ့ကျင့်ရေး
Gurgaon အတွက် Ranorex v8.x (အခြေခံပညာအဆင့်မြင့်ရန်) လက်မှတ်ကုန်ကျစရိတ်
Gurgaon အတွက် Ranorex v8.x ဘို့အင်စတီကျု (Advance မှအခြေခံပညာ)
Gurgaon အတွက် Ranorex v8.x (Advance မှအခြေခံပညာ)
Ranorex v8.x (Advance မှအခြေခံပညာ) Gurgaon အတွက်လက်မှတ်
Gurgaon အတွက် Ranorex v8.x (အခြေခံပညာအဆင့်မြင့်ရန်) သင်တန်း
အကောင်းဆုံး Ranorex v8.x (Advance မှအခြေခံပညာ) သင်တန်းအွန်လိုင်း
Ranorex v8.x (Advance မှအခြေခံပညာ) လေ့ကျင့်ရေး
ပရိသတ်ကို & လိုအပ်ချက်
ဇယား & အခကြေးငွေများ
Ranorex စတူဒီယိုRanorex GmbH သည်, တစ်ဦးဆော့ဖ်ဝဲကိုဖှံ့ဖွိုးတိုးကုမ္ပဏီအားဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးမယ့် GUI ကိုစမ်းသပ်အလိုအလျောက်မူဘောင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါမူဘောင် desktop ပေါ်မှာများ၏စမ်းသပ်အသုံးပြုသည်, web-based နှင့်မိုဘိုင်း applications.Ranorex စတူဒီယိုထိုကဲ့သို့သောကို C # နှင့် VB.NET အဖြစ်စံပရိုဂရမ်းမင်းဘာသာစကားများကို အသုံးပြု. automated စမ်းသပ် module တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအထောက်အပံ့
ကို automation Window Application ကိုစမ်းသပ်ခြင်း
ကို automation က်ဘ်လျှောက်လွှာစမ်းသပ်ခြင်း
ဒေတာကို Driven စမ်းသပ်ခြင်း
ကို manual ကို C # Scripting ကို အသုံးပြု. စမ်းသပ် Creating & ပြေး
သရုပ်ဖော် Programming ကို အသုံးပြု. Creating Scripts
မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ Module & Code ကို Module နှင့်အတူ Hybrid ကိုမော်ဒယ်
Ranorex ဝေးလံသောအေးဂျင့်ကိုသုံးပြီးဝေးလံခေါင်သီ Execution
ဝေးလံခေါင်သီဆယ်လီနီယမ်ပေါင်းစည်းရေးနှင့်အတူ Web ကိုစမ်းသပ်ခြင်းကွပ်မျက်
Software ကိုစမ်းသပ်ခြင်း Concepts
XPath ဆိုတာ & CSS ကို Concepts
ကို C # Language အခြေခံ
သင်တန်းအမှတ်စဥ်ကောက်ကြောင်း Duration:3နေ့ရက်များ
Ranorex Tool ကိုမှနိဒါန်း
Ranorex Tool ကို၏အစိတ်အပိုင်းများ
အနက်အဓိပ္ပာယ်ဖွ Ranorex စတူဒီယို IDE
Ranorex သူလျှို tool ကိုအတူလုပ်ကိုင်
Ranorex ၏ object သတ်မှတ်ခြင်း Techniques
ကိုယ်တိုင် RanoreXpath ရေးသားခြင်း
Ranorex ရှိ Instrumentation Wizard ကိုအတူလုပ်ကိုင်
Ranorex Add-on Firefox ကို & Chrome ကိုမှ Installing
IE ကို, Firefox ကို & Chrome မှာက Web Applications ကို၏ခြေရာခံ္တု
RanoreXpath အတွင်း CSS ကိုအသုံးပြုခြင်း
RanoreXpath မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ mode အမျိုးမျိုး
ရိုးရှင်းသော, Reduce & StepCostReduce မော်ဒယ်အကြားခြားနားချက်ကိုနားလည်ခြင်း
Quantile / မောင်နှမအချက်များနှင့်အတူ RanoreXpath စိတ်ကြိုက်
Creating Ranorex ကို C # စီမံကိန်း
Ranorex စီမံကိန်း & ဖြေရှင်းချက်ပြန်ဆို
Ranorex စီမံကိန်း File System ကိုနားလည်ခြင်း
မှတ်တမ်းတင်တဲ့ Keyword ဒေတာများကိုအနက်အဓိပ္ပာယ်ဖွ
တဲ့ Keyword ဒေတာများကိုနောက်ကွယ်မှကို C # code ကိုပြန်ဆို
Ranorex Log in ဝင်ရန်ရလဒ်များအပြေးပြီးတော့လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း
Ranorex repositories နှငျ့အလုပျလုပျ
ခြေရာကောက်သုံးပြီး Repository မှပစ္စည်းများထည့်သွင်းခြင်း
<Ctrl +> + <လွင်> ဖြတ်လမ်းသုံးပြီးဖွင့်လှစ် repository မှပစ္စည်းများထည့်သွင်းခြင်း
ကိုယ်တိုင် Repository မှပစ္စည်းများထည့်သွင်းခြင်းနှင့် Path ကို defining
နောက်ထပ် repositories Creating နှင့်ပစ္စည်းများထည့်သွင်းခြင်း
အသုံးမပြုတဲ့ပစ္စည်းများနှင့်အတူ repositories တက်ပျော်စေ
မှတ်တမ်းတင် Module တစ်ခုအထူးသဖြင့် repositories ပုံဖော်
မှတ်တမ်းတင် Module အတွက်မြေပုံ & Embedding repositories
Shared repository ကိုအဖြစ်တစ်ခုတည်း repository ကိုအသုံးပြုခြင်း
ကိုယ်တိုင် Module Creating & ပြေး
Ranorex အဝေးမှအေးဂျင့်ကို Install လုပ်ခြင်း
ဝေးလံခေါင်သီကွပ်မျက်အဘို့အမျိုးစုံ TestRun Configuration ကိုထည့်သွင်းခြင်း
Ranorex ကွဲပြားမှု running ။ တဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအဝေးမှအေးဂျင့်အပေါ်စမ်းသပ်မှု Suite ၏ TestRun Configuration
နေ့ II ကို
အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများစီမံခန့်ခွဲရန်တစ်ဦးချင်း Folders Creating
တစ်ဦးချင်း repositories Creating
အဆုံးမှအဆုံးသို့အလိုအလျောက်ဘို့ပြန်သုံးနိုင်သောခွဲ module တွေ Creating
ခွဲ module တွေနှင့်အတူစမ်းသပ် Suite အတွက်စမ်းသပ်မှုဖြစ်ရပ်မှန် Creating
စမ်းသပ်ခြင်း Suite ၏ရလာဒ်ကို run & လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း
ပြင်ပ Excel ကိုဖိုင်မှတ်တမ်းအတွက်စမ်းသပ်မှုမှာ Data Creating
ဒေတာများကိုရင်းမြစ်အဖြစ်ပြင်ပ Excel ကိုဖိုင်မှတ်တမ်းထည့်သွင်းခြင်း
module အတွက် Module Variable Creating
parameterized Module အဆင့် / repository RanorexPath
ဒေတာများကိုစမ်းသပ်ခြင်းဖြစ်ရပ်မှန်မှ binding & Module Parameter မှ Excel ကိုကော်လံ binding ထည့်သွင်းခြင်း
အပြေးမှာ Data Driven စမ်းသပ်ခြင်းဖြစ်ရပ်မှန် & လေ့လာသုံးသပ်ခြင်းဒေတာများ
parameterized data တွေကိုမှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြမှ Module မှအတည်ပြုခြင်းပေါင်းထည့်ခြင်း
Log in ဝင်ရန်မှလျှပ်တစ်ပြက်အစီရင်ခံ
တာဝန်ကျတဲ့နေရာ: Web ကိုလျှောက်လွှာများအတွက် modular အဆုံးမှအဆုံးသို့ DDDT script ကို Create
မှုများ & စမ်းသပ်ခြင်း Suites စုံစမ်းမှ Setup ကို & Teardown Block ကိုထည့်သွင်းခြင်း
Setup ကို & Teardown လုပ်ကွက်မှမော်ဂျူးများထည့်သွင်းခြင်း
စမ်းသပ်ကရိယာတွေနဲ့စမ်းသပ်ဖြစ်ရပ်မှန် / စမ်းသပ်ခြင်း Suite running
Item သက်တော် Validation ဖျော်ဖြေ
Item စာသား, Size ကို, တည်နေရာ Validation ဖျော်ဖြေ
Image ကိုအခြေခံပြီး Item အသိအမှတ်ပြုနှငျ့အလုပျလုပျ
ရလဒ်များအပြေး & လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း
စီမံကိန်းမှကျင့်ထုံး Module ထည့်သွင်းခြင်း
ကို C # Code ကိုဖွဲ့စည်းပုံကိုနားလည်ခြင်း
MessageBox Code ကိုထည့်သွင်းခြင်း
အစီရင်ခံစာ Log in ဝင်ရန်ကို Message ထည့်သွင်းခြင်း
(ဦးဝင်း App ကိုများအတွက်) End-to-end Code ကိုမော်ဂျူးများအတူလုပ်ကိုင်
အဘို့အ repositories သုံးပြီးမော်ဂျူးများတစ်ဦးချင်း Creating:
Code ကိုမော်ဂျူးများနှင့်အတူ Creating & ကို run စမ်းသပ်ခြင်းဖြစ်ရပ်မှန်
Code ကို Module Parameter ထည့်သွင်းခြင်း
Code ကို Module အတွက်အတည်ပြုခြင်းပေါင်းထည့်ခြင်း
Code ကို Module ထံမှ Screenshot အစီရင်ခံ
Code ကိုမော်ဂျူးများကို အသုံးပြု. DDT စမ်းသပ်ခြင်းဖြစ်ရပ်မှန် Creating & ပြေး
Web ကိုလျှောက်လွှာများအတွက် Code ကိုမော်ဂျူးများ (ကို C # Scripting) ကို အသုံးပြု. DDT စမ်းသပ်ခြင်းဖြစ်ရပ်မှန် Creating & ပြေး
နေ့ III ကို
စီမံကိန်းမှအသုံးပြုသူတို့၏ Code ကိုငွေကောက်ခံထည့်သွင်းခြင်း
ကို C # အသုံးပြုသူ Code ကိုငွေကောက်ခံအတန်းအစားဖွဲ့စည်းပုံကိုနားလည်ခြင်း
Code ကို Module ကနေအသုံးပြုသူသတ်မှတ်ထားသောနည်းလမ်းများ Calling
သရုပ်ဖော် Programming နှငျ့အလုပျလုပျ
စာမျက်နှာ Object ကိုမော်ဒယ် Classes ရဲ့နှငျ့အလုပျလုပျ
ဦးဝင်း App ကိုများအတွက် Pom Classes ရဲ့ Creating & ပြေး
Web App များအတွက် Pom Classes ရဲ့ Creating & ပြေး
Dynamic နှင့်အလုပ်လုပ် Option ကိုရှာမည်
Hybrid ကိုစမ်းသပ်ခြင်း & Models နှငျ့အလုပျလုပျ
စမ်းသပ်ခြင်း Suite တစ်ဦးက New စမ်းသပ်ခြင်းဖြစ်ရပ်မှန် Creating
Recoded Module ထည့်သွင်းခြင်း
Code ကို Module ထည့်သွင်းခြင်း
PopupWatcher သုံးပြီးကိုင်တွယ် popups
Creating PopupWatcher လူတန်းစား
Code ကိုအဆင့်မှာ popups ကိုင်တွယ်
Setup ကို & TearDown သုံးပြီး Suite အဆင့်မှာ popups ကိုင်တွယ်
Ranorex အဝေးမှကိုယျစားလှယျ & ဆယ်လီနီယမ် WebDriver ဆုံးမှတ်အကြား
Ranorex & ဆယ်လီနီယမ် WebDriver ပေါင်းစည်းရေး
အချိန်ကုန်သွားအတူဆယ်လီနီယမ် Grid Hub & Node Configuring
ဆယ်လီနီယမ် Grid Endpoints ထည့်သွင်းခြင်း
ဝေးလံခေါင်သီဆယ်လီနီယမ်ဆုံးမှတ်အပေါ် Ranorex က်ဘ် TestCase running
အဝေးမှ Execution ရလဒ်များလေ့လာသုံးသပ်ခြင်း
info@itstechschool.com မှာကျွန်တော်တို့ကိုစာရေး & သင်တန်းစျေးနှုန်း & လက်မှတ်ကုန်ကျစရိတ်, အချိန်ဇယား & တည်နေရာ + 91-9870480053 မှာကျွန်တော်တို့ကို ကျေးဇူးပြု. ဆက်သွယ်
ကြှနျုပျတို့ကိုတစ်ဦး Query drop
(ဥပမာဒီသင်တန်းကဲ့သို့) တစ်ဦးလက်မှတ်ရ Scrum သင်တန်းပေးသူကသင်ကြားထားတဲ့အတွက်လူတစ်ဦးနှစ်ဦးတစ်နေ့လျှင် (16 နာရီ) CSPO သင်တန်း၏အောင်မြင်သောပြီးစီးတွင်, သငျသညျလက်မှတ်ရ Scrum ကုန်ပစ္စည်းပိုင်ရှင်သကဲ့သို့သင်တို့သတ်မှတ် Scrum မဟာမိတ်အဖွဲ့ကနေလက်မှတ်ကိုလက်ခံရရှိပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါလက်မှတ် Scrum မဟာမိတ်တစ်ဦးနှစ်နှစ်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်သည်။
ကျေးဇူးတင်ပါသည်များနှင့်ကအံ့သြစရာများနှင့်သိကောင်းစရာများ session တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။
ဖြစ်သော Rakesh မြည်းသည်
တွဲဘက် Manager ကို (အိုင်တီ)
ဝန်ထမ်းများထောက်ပံ့ Gr8 ။ သင်တန်းဆရာ ITEM ခုအတွက်ကောင်းသော exprinace ရှိသည်။ အကောင်းဆုံးအစားအစာရဲ့အရည်အသွေး။ ခြုံငုံအလွန် goo ( ... )
Kamal န် Sharma က
အတိမ်အနက်အတွက်ဒိုမိန်းအသိပညာနှင့်အတူ Excellent ကသင်တန်းဆရာ။ ကောင်းသောလေ့ကျင့်ရေးအခြေခံအဆောက်အအုံ။
ပြောင်းလဲမှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည် Manager ကို
ဒါဟာထိုကဲ့သို့သောအံ့သြစရာသင်တန်းဆရာနှင့်သင်ယူမှုပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူနေတဲ့အံ့သြဖွယ်လေ့ကျင့်ရေးခဲ့သည်။ ဒါဟာ ( ... ) GRE ခဲ့သည်
ဒါဟာအကြီးအသင်ယူမှု session တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကတခြားဘဝက c ( ... ) အဘို့ဤဆင်တူပိုပြီးအစည်းအဝေးများရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်
အရည်အသွေးကိုန်ထမ်းများနှင့်အားလုံးလိုအပ်သော Infra နှင့်အတူ၎င်း၏အလွန်ကြီးစွာသောအဖွဲ့အစည်း။ အတွက်ရှင်းလင်း ITIL အခြေခံအုတ်မြစ် ( ... )
မန်နေဂျာ Huawei ကအိန္ဒိယမှာ
ငါပြီးခဲ့သည့်လကသူ့ဟာသူအတွက်၎င်း၏နည်းပညာကျောင်းမှ ITIL ငါ၏အခြေခံအုတ်မြစ်များနှင့်အလယ်အလတ်ပွုပါပွီ။ ( ... )
Shweta Sharma က
ဒါဟာအကြီးအ session တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ သင်တန်းပေးကောင်းသောဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါသှနျသငျသူ၏လမ်းကြိုက်တယ်။
Akshay Sharma က
Bhanuja Sharma က
Ericsson ကဂလိုဘယ် India Pvt Ltd မှ, Gurgaon
အဆိုပါကျွမ်းကျင်ပိုင်သင်၏အဖွဲ့အစည်းနှင့် ( ... ) w အပေါငျးတို့သတိထားတော်မကယ်မလွှတ်သဖြင့်ကောင်းသောအပြနေသည်
ငါသည်သင်တို့၏ဈ ( ... ) ကနေ ITIL အခြေခံအုတ်မြစ်သင်တန်းယူရန်သင့်အဖွဲ့အစည်းအကြောင်းကိုမေးမြန်းသောသူအပေါငျးတို့အကြံပြုပါလိမ့်မယ်
Himanshu Sharma က
လေ့ကျင့်ရေးညှိနှိုင်း၏ excellent.The လမ်းကြောက်မက်ဘွယ်ခဲ့ပါတယ်။ သင်တန်းဆရာကောင်းစွာ expericed နှင့် TOU ( ... ) ခဲ့
Kuldeep Singh က
ဒါဟာဆယ်လီနီယမ်ဘို့ငါတို့နည်းပြဆရာအဖြစ် Chikanna ရှိသည်ဖို့အမှန်တကယ်ပျော်မွေ့ခဲ့ပါတယ်။ ယေဘုယျအားကောင်းသော conten ( ... )
ဆယ်လီနီယမ်ကိုသင်ယူနှင့်အလိုအလျောက် t ကိုများအတွက် CICD အောင်မြင်ရန်အယောင်ဆောင်သူအပေါငျးတို့သပညာရှင်များ ( ... ) များအတွက်
ငါခဲ့သော၎င်း၏အကောင်းဆုံးကိုလေ့ကျင့်ရေး။ အဆိုပါသင်တန်းဆရာ Java နဲ့ Pyth ( ... ) ၏အများဆုံးကုကျွမ်းကျင်မှုခဲ့
ကောင်းသောသင်တန်းအကြောင်းအရာ။ PPT နှင့်ဗီဒီယိုများပေါ်လက်နှစ်ဦးစလုံး module တွေရန်ရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်ကြ၏။
အဆိုပါသင်တန်းဆရာအသိပညာ၏လုံလောက်သောနှင့်အတူပရော်ဖက်ရှင်နယ်ခဲ့သူ ( ... ) အသေးစိတ်နှင့် cl အတွက်အကြောင်းအရာများကရှင်းပြခဲ့သည်